Android လုလင်: August 2013
C8813 Step2Fail error ရှင်း နည်း
C8813 Step2Fail error ရှင်း နည်းStep2Fail error for C8813
C8813 ကို system update ပေးလို့ update လုပ်လိုက်တဲ့အခါ SIM Card မဖတ်တော့တာတွေ
အဲဒီအချိန်ကျရင် Firmware ပြန်တင်ကြရပါတယ်။
Firmware ပြန်တင်ရင်လည်း Step2မှာ update fail ဖြစ်နေတာတွေဖြစ်တက်ကြပါတယ်။
ကျတော်လည်း update fail ဖြစ်လို့လိုက်ရှာရင်း အဆင်ပြေတာလေးတွေ့လို့ပြန်လည်
zip file အားရယူပါ။
ရလာတဲ့ zip file လေးကိုဖြည်လိုက်ပြီး ရလာတဲ့ file ထဲက dload folder လေးကို
SD Card ထဲထည့်လိုက်ပါ။
ြဲပီးရင်တော့ Phone ထဲထည့်ပြီး volume up + volume down + power လေးနဲ့ dload လေးကို
ပြီးရင်တော့ Firmware လေးပြန်တင်လို့ရပါပြီ။
ရေးတဲ့အချိန် 5:03 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
မြန်မာစကားပုံများ App For Android
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ကိုကို ညီညီတို့ အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုရမှာပဲ ဟီးးးးးးး
လုလင်ပျိုကို sexy ဂိမ်းလေးတွေ တင်ပေးပါလားလို့ လာလာပြောပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM 59 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဤအသုံးချပရိုဂရမ်တွင် ကလေးများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများက မိမိကလေးကို ကျန်းမာသော၊ ထက်မြက်သော၊ ဥာဏ်ကောင်းသော၊ လိမ္မာသော၊ ထူးချွန်သောကလေးများ ဖြစ်ရန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှစ၍ အရွယ်ရောက်ချိန်အထိ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များကို လမ်းပြပေးသော အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Gif Camera (ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ပုံ အရှင်လေးတွေ လုပ်မယ်။ video gif ပါရတယ်နော်)
ကဲ……ဒီတစ်ခါတင်ပေးထားတဲ့ application လေးကတော့ လှုပ်စိလှုပ်စိ ပေါ့ဗျာ။
အကြောင်းအရာ camera ဆော့ဝဲ
Cloud SMS v2.1.16 Apk
ယခုကောင်လေးကတော့ Simcard မပါတဲ့ Tablet တွေနဲ့ ဖုန်းကို အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားရုံဖြင့် ဖုန်းမှာ
၀င်လာတဲ့ smsတွေကို Tabletပေါ်မှာဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ-မိမိကခြံထဲမှာ Tablet နဲ့ဂိမ်းကစား
နေတယ် ဖုန်းကအိမ်ထဲမှာကျန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒီင်္လိုအချိန်မျိုးမှာ ဒီကောင်လေးကအသုံးဝင်
ပါတယ်။ ဖုန်းတနေရာရာမှာကျန်ခဲ့ရင်တောင်မှ အရေးကြီးတဲ့ SMS ကိုမဖတ်လိုက်ရမှာ
လိုက်ပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 301 kb ဘဲရှိပါတယ်။ Android version 2.3မှ 4.1
ဒီတစ်ခါ SONY ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် ဘာ box မှသုံးစရာမလိုဘဲ Firmware
အကြောင်းအရာ Firmware Download, ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်သွယ်ရာ
Huawei C8813 ကို GSM Sim ထည့်သွင်းအသုံးပြုနည်း
ယ္ခု နောက်ပိုင်း အသုံးများနေတဲ့ Modeal တစ်မျိုးပါ တန်ဖိုးနည်း လိုင်းကတ်ဖြစ်သော 1500 တန် များအသုံးများနေကြတာတွေ့မြင်ရပါတယ်။
Huawei C8813 ကို GSM Sim ထည့်သွင်းအသုံးပြု လို့ ရပါတယ်
Firmware ဟြေင်းလဲပြီးတော့ တင်ကြည့် ရအောင် ဗျာ ..။
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ Huawei Firmware, ဆော့ဝဲ ။လုပ်ဆောင်ချက်
Android မှာ ကျားထိုးမယ် ( Checkers Game for Android )
ဒီနေ့ အရိပ်ကောင်းတဲ့ သစ်ပင်အောက်မှာ ဦးလေးကြီးနှစ်ယောက် ..
အကြိတ်အနယ် ကျားထိုးနေကြတာ တွေ့ခဲ့တယ်။
သူတို့ကျားထိုးတာကြည့်ပြီး ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတယ်။ ကျားထိုးတာ android အတွက်
ဒါနဲ့ ကျားထိုးတာကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိတော့ ဘာရိုက်ပြီးရှာရမလဲ စဉ်းစားမရဖြစ်တယ်။
ဒါနဲ့ google မှာပဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ကာ ရှာတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျားထိုးတာကို အင်္ဂလိပ်လို Checkers လို့ခေါ်မှန်းသိရတယ်။ ဒါနဲ့ Checkers android game တွေရှာခဲ့တယ်။
သုံးလေးခုတော့ တွေ့တယ်။ အဲ့ထဲကနေ နှစ်ယောက်ဆော့ (ဟိုဘက် ဒီဘက်) ရတဲ့ဂိမ်းကို တင်လိုက်တယ်။
2 Players ဆော့လို့ရတော့ဘော်ဒါတွေနဲ့ ဆော့လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ Chess မထိုး တတ်ဘူး။ ကျားတော့
ကဲ .. Android မှာ ကျားထိုးလို့မရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ။ ဘယ်သူမှမပြောဘူး :P ကျားထိုးကျွမ်းသူတွေ တစ်ပွဲတစ်လမ်းလောက်
Android 2.2 နှင့်အထက် ဖုန်းများတွင် ကစားနိုင်ပါတယ်ခင်ည :)
အကြောင်းအရာ game ဆော့ဝဲ
EarSmart က သင့်ဖုန်းကို မော်ဒယ်မြင့် ဖုန်းတွေလို နားကြပ်ကြိုး ထိုးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ဖွင့်ချင်တဲ့ .. app ကို ပွင့်သွားအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်
earphone(နားကြပ်)ကြိုးထိုးပြီး သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါ ..
သီချင်းဖွင့်ဖို့ music player ကို ရှာရပါသေးတယ်။
မော်ဒယ်မြင့်ဖုန်းတစ်ချို့မှာတော့ နားကြပ်ကြိုးထိုးလိုက်တာနဲ့ ..
music player အလိုလို ပွင့်ပါတယ်။
ဖုန်းတစ်လုံး အသစ်ဝယ်ပြီး စသုံးမယ့် အချိန်နဲ့ နောင်အချိန်တွေမှာ
Battery ကိုဘယ်လောက်အချိန်ကြာကြာ အားသွင်းသင့်တယ် ဆိုတာကို
*** လန်းပါပေ့ Hovering Controls ရယ် ***
App အလန်းလေးတွေ တင်ပေးပါဆိုတဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် ..
Hovering Controls ဆိုတဲ့ App အလန်းလေး တင်ပေးတယ်ဗျာ။
ANDROID ဖုန်းမှာ VIBER လို စကားပြော ချက်တင်လုပ် အသံဖိုင်ပို့ ရတဲ့ FREEPP
Android ဖုန်းမှာ Viber လို စကားပြော ချက်တင်လုပ် အသံဖိုင်ပို့ ရတဲ့ FPP
Viber လိုပဲ အကုန် ရပါတယ် ဖုန်းထဲထည့်ရင် Viber လို ကုဒ်ရိုက်စရာမလို
ဖုန်းနံပတ် ထည့် တာနဲ့ သုံးရပါတယ် ကောင်းတယ်ဆို လို့ စမ်းသုံးနေတာ
မြန်မာပြည်က လူတွေ ပြောနေတာနဲ့ အသုံးပြုရင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်
ကိုယ့်ဖုန်းကို ဘယ်သူ လာကိုင်သွားလဲ သိချင်ရင် PhoneSpy ယူသုံးထားပါ
ဘော်ဒါ ဖုန်းအနားမှာ မရှိတဲ့အချိန် ဘော်ဒါရဲ့ ဖုန်းကို ဘယ်သူတွေ ..
၀င်ကလိသွားလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ်ပေးမယ့် စုံထောင်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ ဖုန်းကိုင်လိုက်တဲ့သူရဲ့ ..
Android Version 4.1.x အထက်တွေမှာ မြန်မာစာရေးရာတွင် စာတွေရှေ့နောက်မကူးစေတဲ့ Pro Myankey V2.0 Beta5For Android
Android Version 4.1.x အထက်တွေမှာ မြန်မာစာရေးရာတွေ စာတွေရှေ့နောက်မကူးစေတဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Pro Myankey V2.0 Beta5ကီးဘုတ်လေးပါ
စာရိုက်ရတာ အထူးကောင်းမွန် စာရိုက်မြန်စေတဲ့ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးကီးဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်
စလောင်းတပ်ဆင်ပြုပြင်ရေးသမား များအတွက် Android Application ပါ
စလောင်းဆရာများရေ......ဒီ apk လေး က ကျွန်တော်တို့ စလောင်းဆရာများအတွက် မရှိမဖြစ်လေးပါ......
USB ON မထား၊ CWM တင်မထား၊ ROOT လုပ်မထားဘဲ RECOVERY ရှိယုံနဲ့ HUAWEI PHONE SCREEN LOCK ကိုဖြည်မယ်
မြန်မာဂိမ်း အသစ်တစ်ခု လာပြန်ပြီ I'm Jack (ခုန်ပျံကျော်လွှား အန္တရယ်များ တဲ့နော်
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM4comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
SAMSUNG ANDROID ဖုန်းတွေမှာအီးမေး PATTEN /LOCK ကျတာကိုပြင်မယ်
မင်္ဂလာပါဒီနေ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းများကို samsung galaxy ဖုန်းကို e-mail patten/password ကျရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။မသိသေးတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ ပြီးရင်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ နေက်ပြီးဘက်ထရီကိုပြန်ထည့် ပြီး ဖုန်းကို ပါဝါခလုတ်ရယ် +အသံတိုးတဲ့ ခလုပ်-ရယ် + home ခလုပ်ရယ်သုံးခုကိုပြိုင်တူတွဲနိပ်ပြီးဖွင့် လိုက်ပါ။ samsung galaxy logo ပေါ်လိုက်ရင်လွတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်အောက်ကပုံကအတိုင်း ၃ ခုမြောက်စာကြောင်းဖြစ်တဲ့ wipe data factory reset ကိုအသံတိုးတဲ့ ခလုပ်နဲ့ အောက်ရောက်အောင်ဆွဲချပါ။ပြီးရင် home button ကိုနိုပ်လိုက်ပါ
ရေးတဲ့အချိန် 8:30 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Market For Android ( 1MB )
Android ဖုန်းတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ့် Market လေးတစ်ခုပါ။များသော အားဖြင်တော့ Google Play Store မှာ အလကားပေးတဲ့ Application တွေကို အလွယ်တကူဒေါင်းနိုင်မယ့် Market လေးပါ။
android ဖုန်းမှာ ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲ ဖိုင်တွေကို hide မယ်
လုလင်ပျို ဟိုတုန်းကလည်း ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို hide ရအောင် ဆိုပြီး တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒါက ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုပဲ ရတာလေ။
အခုကတော့ အဲလို မဟုတ်တော့ဘူး ။မမြင်စေချင်တဲ့ ဖိုင် တစ်ခုလုံးကို ဖွက်ထားမှာပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Photo movie creator (မိမိဓါတ်ပုံတွေကိုနောက်ခံသီချင်းထည့်ပြီး movie အဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်) (For Android phone)
မင်္ဂလာပါဗျာ Android ဖုန်းတွေမှာ မိမိဓါတ်ပုံများကိုနောက်ခံ သီချင်းထည့်ပြီး movie အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး Facebook ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် ပြန်ရှယ်လို့ရပါတယ်ပြောင်းလဲတဲ့ အခါလည်း မိမိစိတ်ကြိုက် စာသားတွေနဲ့ Effect တွေ ထည့် သွင်းလို့ ရပါတယ်ဗျာ။ ဖုန်းထဲမှာ Photo Sliteshow လုပ်ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ File Size (16.44MB) ရှိပါတယ်...။
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM5comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဆော့ဝဲတွေ free ရတဲ့ Black market ဆို သိကြပါတယ်နော် icon အလန်းနဲ့ update ထွက်ထားပါတယ်
google play မှာ သွားမရှာနဲ့ မောသွားမယ်
ဒီ Black market က google play နဲ့မတည့်ဘူး
ဘာလို့ဆို google play မှာ ပိုက်ဆံပေး ၀ယ်ရတာတွေကို ဒီ Black market ကရအောင် လုပ်ထားတာကိုး
လုလင်ပျို တော့ သုံးနေတာ ကြာပြီ
icon အလန်းနဲ့ update ထွက်တာနော်
လက်ခုပ်တီး ပြီး ဖုန်း ရှာမယ်
ကျနော် တို့ တစ်ခါ တစ်ခါ ဖုန်းပျောက်ရင် ခေါင်းနောက်အောင်ရှာကြရတယ်ဗျ။ ဟို နားထားမိမှန်းမသိ…ဒီနားထားမိမှန်းမသိ ဖြစ်နေတတ်တယ် ဗျ…ကဲ ဒီ App လေးကတော့ အဲပြသာနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သူက လက်ခုပ်လေးတီးလိုက်ယုံနဲ့ မိမိ ဖုန်းရှိတဲ့နေရာကို ရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
Facebook 3.6 For Android
Android ဖုန်းတွေအတွက် ဖေဘွတ်ရဲ့ အသစ်ထွက် 3.6 ဗားရှင်းအသစ်လေးပါ။
ဖုံးအတွင်း ဌင်းဆော့ဝဲapk ဖိုင်ကို အသုံးပြု့ပါက ဖုံး Bill ကုန်စေသည်အထိAuto မက်ဆေ့များသင့်မှတ်ိထားသောဖုံးနံပါတ်ပေးပို့နေပါမည်။
ရေးတဲ့အချိန် 4:48 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android Phone Booster (ဖုန်းလေးနေရင် ဒီဆောဝဲလေးသုံးကြည့်ပါ....တကယ်ဖလန်းဖလန်း....။) (myanmar application လေးပါ)
Andriod ဖုန်းတွေ ဆော့ရတာလေးနေတယ် ဂျမ်းဖြစ်နေတယ်ဆို ဒီဆောဝဲလေးသုံးကြည့်ပါ တကယ် ပေါ့ သွားပါလိမ့်မယ်...။ကျနော့်ဖုန်းလေး ဆော့ရတာအားမရတော့လို့ ဆောဝဲတွေ တခုပြီးတခု လိုက်ထည့် တာ တော်တော်များများ က မသိသာသလိုပဲ ဒီဆောဝဲလေးထည့်ပြီး start ကို နှိပ်ပြီးတာနဲ့ တကယ်ကို ပေါ့ သွားတာ ကျနော်လက်တွေ့ပါပဲ ...။ဒါကြောင့် ဆိုက်ပေါ်တင်လိုက်တာပါ....။လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အလွယ် ဒေါင်းယူနိုင်အောင် လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ မြန်မာလူမျိုးတွေ အသုံးပြုတာ အဆင်ပြေ အောင်လို့ မြန်မာလို ပြောင်းထားတဲ့ မြန်မာဆောဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်..။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ...။
ရေးတဲ့အချိန် 2:41 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
C8813,CDMA ကို GSM 3G လေး သုံးကြမယ်
အရင်ဦးဆုံး GSM သုံးလို့ရတဲ့ Firmware လေးကို ဒေါင်းထားလိုက်ပါ
Firmware buildnumber ကတော့ 606 ပါ
ပုံထဲကလို ချစ်သူ ပုံနောက်ခံလေးနဲ့ wallpaper မှာ လန်းချင်ရင်
အရှေ့ကပုံကိုလည်း ကြိုက်တာ ရွေးလို့ရတယ်။
ချစ်သူများနေ့မှာ မတင်ဖြစ်လိုက်လို့ ခုမှတင်ရတာ ချောတီးးးးးးနော်
အကြောင်းအရာ wallpaper ဆော့ဝဲ
MPT Service v1.0.1 (ဗားရှင်းအသစ်ပါ အရင်ဟာ သိပ်အဆင်မပြေလို့ အသစ်ထပ်ထုတ်တာပါတဲ့ )
MPT Service v1.0.1 လေးကတော့ အရင် v1.0.0 မှာ
GSM အချင်းချင်းငွေပို့နိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မူ့ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 2:06 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
All format media player ဆိုတာ media နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့format တွေအားလုံးဖွင့်လို့ရတယ်..ဒီထက်ကောင်းတာက
လုလင်ပျိုတို့ ဖုန်းမှာ ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်ကြတယ်။သီချင်းတွေ နားထောင်ကြတယ်နော်။
သီချင်းတွေ နားထောင်တာတော့ အခက်အခဲမရှိပေမယ့် ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်တဲ့အခါ format အားလုံး မရကြဘူးလေ။
လုလင်ပျို ကိုင်ထားတဲ့ဖုန်းက ဗားရှင်းနိမ့်တယ်။ gio s5660 လေ ။browser တွေမှာ flash မရဘူး။plug in ထည့်လည်း မရဘူးဗျ။
imei နဲ့ စစ်လိုက်တော့ ဖုန်းထုတ်ကတည်းကိုက flash မရတဲ့ အကြောင်းပြောထားတယ်။
ဒါတော့ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖလပ် မရလည်း ဘာဖြစ်လဲ နော့။ရရင် လေးနေအုံးမယ်လေ။
အဲ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ ဖွင့်တော့ flash မရတဲ့ အတွက် flash player plug in လည်းမရတော့ flv ဆိုတဲ့ format နဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် တွေ ကြည့်လို့ မရပြန်ဘူးဗျာ။
format ပြောင်းရမှာလည်း ပျင်းတော့ ရှာလိုက်တာ ဒီ All format media player ကိုတွေ့တာပဲ။အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။
သယ်ရင်းတို့လည်း လုလင်ပျို လို flv တွေ ကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒေါင်းလိုက်နော်။
ဗီဒီယို format အကုန်ရတယ်။
Audio format အကုန်ရတယ်။
အဲ တစ်ခုပဲ ပြောစရာ ရှိတာက .swf ဆိုတဲ့ ဖလပ်ဆောင်းမရတာပဲ။
ဒါပေမယ့် မပူနဲ့ ဖလပ်ဆောင်းရတဲ့ swf player ကို ဒီဘလော့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပို့စ် အဖြစ် တင်ထားပေးပြီးသားပါ။
အခု All format media player ကို ယူမယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းပေတော့
ဖုန်းသမားတွေအတွက် google play မှာဒေါင်းချင်ရင် ဒီမှာသွားယူ
google play မှာတော့ Almost Format Media Player ဆိုပြီး နာမည်နဲနဲလွဲတယ် ဒါပေမယ့် တူတူပဲနော်
ဒီမှာ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းချင်ရင် http://adf.ly/Tkurp
အကြောင်းအရာ player ဆော့ဝဲ
Android မှာဖြစ်တတ်တဲ့ Out of space ကိုဖြေရှင်းမယ်
Android Phone မှာ application and Game သွင်းတဲ့အခါ သွင်းမရပဲ
=> Out of space <= ဖြစ်နေပြီး အခြား အရာတွေကို Delete ခိုင်းတတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက် Delete လုပ်လုပ် သွင်းမရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်
Root Explorer ရှိထားရပါမယ်
Root Explorer => data => apps ထဲဝင်လိုက်ပါ
အဲဒီထဲမှာသွင်းမရတဲ့ app/game အမည်နဲ့ .odex ဖိုင်လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်
အဲဒီကောင်လေးကို Delete ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်
နောက်တနည်းကတော့ မိမိရဲ့ Device ကို recovery mode ထဲကနေပြီးတော့
wipe dalvik cache လုပ်ပေးလိုက်ရင်လဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
ဖုန်းအားပြည့်ရင် အချက်ပေးမယ် unplug လုပ်ရင် အချက်ပေးမယ့် Battery alarm
ဆော့ဝဲ အလန်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
Battery alarm ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။
သူက ဘာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတော့………
ကျနော်တို့ android ဖုန်းတွေမှာ ဖုန်းအားသွင်းနေရင် အားပြည့်ရင် အသံနဲ့ အချက်မပေးဘူးနော်။
ဖုန်းဖွင့်ထားရင်ပဲ notification မှာ ပြတာနော်။
အခု Battery alarm ဆော့ဝဲလေးကို သုံးထားရင် ဖုန်းအားပြည့်ရင် ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ notification အသံလေးနဲ့ အချက်ပေးမှာပါ။
ကိုယ်ကဖုန်းအားသွင်းနေရင်း ဖုန်းဘေးနားမှာမရှိဘူး အခြားအလုပ်တွေ လုပ်နေတယ်ပေါ့
ကိုယ့်ဖုန်းက တစ်ယောက်ယောက်က unplug လာလုပ်ရင် unplug alarm နဲ့ထအော်မှာပါ။
ဒီကောင်လေးကို ထည့်ထားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ဖုန်းအာသွင်းနေတုန်း တစ်ယောက်ယောက်က လာခိုးရင်တောင်မှ မိနိုင်တာပေါ့ဗျာ။
လုလင်ပျိုတော့ ဒါလေးနဲ့ လန်းနေပြီ။
ဖုန်းမှာ အင်တာနက်ဖွင့်ထားရင်တချို့ဆော့ဝဲတွေက update ခဏခဏ ထွက်တယ်။
ခု နောက်ဆုံး update လေး တစ်ခါတည်းတင်ပေးလိုက်တယ်နော်။မနေ့က 12.08.2013 update ပါ။
unplug alarm ဖွင့်ရင် ပတ်ဝေါ့တောင်းပါတယ်။
လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွင့်နိုင်မဲ့ ပတ်ဝေါ့ ပေးလိုက်မယ်ဆို မြန်ဆန်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်။
မီးပျက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက်က unplug လာလုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အသံမြည်ရင် ပေးထားတဲ့ပတ်ဝေါ့ထည့်ပေးမှ အသံပိတ်တယ်နော်။
ကဲ ပြောနေတာတွေများလို့ စကားလည်း ရှည်သွားပြီ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ download လုပ်ပေါ့
Game Hacker ကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုပီး ဂိမ်းများကို ခိုးဆော့မယ် ( FOR ROOT ONLY )
ဂိမ်းတွေကို ကောင်းကောင်းမဆော့ပဲ ခိုးရမှကျေနပ်သော ဘော်ဒါများအတွက်
ကျနော်ပေးထားသော apk လေးကို install လုပ်လိုက်ပါ …… Root တော့လိုမယ်နော်
ဂွပုံစံ Icon လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် အပေါ်မှာပြထားသလိုလေး ပေါ်လာမှာပါ
( – ) လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ဂွပုံလေး ဘယ်ဘက်ထောင့်ကို တက်ကပ်သွားပါလိမ့်မယ်
ကိုယ်ခိုးချင်သော ဂိမ်းကို ဖွင့်လိုက်ပါ…… ဂိမ်းထဲရောက်ရင်ဂွပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်
အပေါ်ဆုံးကပုံလေးလို အကွက်လေး ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်
ကိုယ်ခိုးချင်သော မူးရင်း amount ကိုအကွက်လေးမှာဖြည့်ပီး search ကိုနှိပ်လိုက်
အပေါ်ပုံက 59 လိုမျိုး အများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်
( – ) လေးကိုပြန်နှိပ်ပီး ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကို နည်းနည်းလောက် သုံးလိုက်
သုံးပီးရင် ပြန်ဝင် အကွက်ကလေးက continue လေးကိုနှိပ်လိုက်
ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်….. မျှားဘေးက အကွက်လေးထဲမှာ လက်ကျန် amount လေးကိုဖြည့်
Search လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် ခိုးလို့ရသော ဂိမ်းဆိုပါက Result ၂ခု ၃ခု လောက်ကျလာမယ်
မကျလာရင် ဒါနဲ့ ခိုးမရတာပဲ ….. ခိုးမရတာကလည်း တော်တော် နည်းပါတယ်
Result ရလာရင် အကွက်လေးထဲမှာ 999999999 အပြည့်သာ ပိတ်ရိုက်ပလိုက်
ပီးရင် Modified လေးကိုနှိပ် ဂိမ်းထဲပြန်ရောက်ပီးတော့ ခိုးထားသော amount ကိုတွေ့လိမ့်မယ်
ဒါမှမတွေ့သေးဘူးဆို amount တစ်ခေါက်သုံးလိုက် … ခိုးထားတာ ပေါ်လာလိမ့်မယ်
ကဲ ဂိမ်းခိုးသူအပေါင်း ကျေနပ်ပါပီလားးးးးးး
***** ( ROOT ) လုပ်ထားမှရမှာပါနော်
လိုအပ်သော apk ကို အောက်မှာယူပေးပါနော်……………
DOWNLOAD > http://adf.ly/Thh1U
MPT Service V1.0.0 Apk
ကဲ အလန်းလေး လာပြန်ပြီဗျာ
မိုဘိုင်းတစ်ခေတ်ကျမှ developer တွေ လက်စွမ်းပြနေကြတယ်နော်။
ကိုယ်မထင်မှတ်ထားတာတွေ လုပ်ပြနေကြတယ်။ထွက်လိုက်တဲ့ဆော့ဝဲတွေကလည်း အသစ်အဆန်းတွေချည်းပဲ
ဒီကောင်လေးကတော့ ဒီနေ့မှ ထွက်တာ ထင်တာပဲ လုလင်ပျိုလည်း တွေ့တာလည်း စမ်းကြည့်လိုက်တာပဲ။
myanmarmobilesoftwaredeveloper က ကိုဖြိုးချမ်းရဲ့ လက်ရာလေးပါ။
MPT Service ကိုအသုံးပြုပြီး
(GSM ဖြစ်ဖြစ် CDMA ဖြစ်ဖြစ် ငွေဖြည်မယ်ငွေစစ်မယ်)
ဒီ App လေးနဲ့ မိမိဖုန်းကို ဖုန်းဘေစစ်နိုင်ခြင်း၊ ငွေဖြည့်နိုင်ခြင်း
Internet လျှောက်ထားနိုင်ခြင်းများကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ App ထဲမှာတင် အညွန်းများစွာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
GSM တွေ CDMA များပါ ငွေဖြည်နိုင်ငွေစစ်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုရတာလွယ်ကူပြီး မြန်မာလို Instruction များစွာပါဝင်တော့အဆင်ပြေပါလ်ိမ့်မယ်။
Error ကင်းပြီး File Size ကလဲ 1MB သာသာပဲရှိပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 9:30 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
WifiKill 2.2 apk ( For Android )
Wifi အတွင်းမှ internet အသုံးပြုနေတဲ့ User များကို internet connection မရအောင်
ဖြတ်တောက်ပေးမဲ့ apk ပါ
ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်ကို ဖုန်းနဲ့ရွယ်လိုက်ရုံနဲ့ ငွေဖြည့်နိုင်မယ့် EZ Charge for Android
GSM/CDMA Prepaid ငွေဖြည့်ကဒ်တွေကို စာရိုက်ငွေဖြည့်ရမှာပျင်းသူတွေအတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်ကို ဖုန်းနဲ့ရွယ်လိုက်ရုံနဲ့ ငွေဖြည့်နိုင်မယ့် EZ Charge for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဒီဆော့ဝဲလေးထဲဝင်ပြီး ငွေဖြည့်ကဒ်က code ကိုချိန်ရွယ်လိုက်တာနဲ့ code ကဖုန်းပေါ်မှာပေါ်လာပါမယ်။ ပြီးရင် အောက်က Prefix အကွက်မှာ GSM ဆို *123* ရိုက်ပါ။ နမူနာပြောပြတာနော် ။ အခြားဖုန်းတွေဆိုရင် ကိုယ့် sim card နဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့။ နောက်တစ်ကွက်မှာဘာမှရိုက်ဖို့မလိုပါဘူး။ ပြီးရင် Dial ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ငွေဖြည့်ရုံပါပဲ။ တော်တော်လေးအဆင်ပြေစေမှာပါ။ Scan ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ငြိမ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ EZ Charge for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
EZ Charge for Android အားရယူရန် (Link 1)
EZ Charge for Android အားရယူရန် (Link 2)
EZ Charge for Android အား Google Drive မှ ရယူရန်
ရေးတဲ့အချိန် 9:45 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android လုလင် ဘလော့ တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ချက် အသုံးဝင် app များ မိတ်ဆက်ခြင်း
Android လုလင် ကိုဖတ်ရှုအားပေးနေကြသော သူငယ်ချင်းများအားလုံး မင်္ဂလာပါ။
Android လုလင် ဘလော့ကို လုလင်ပျိုရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးပို့စ်များနဲ့တကွ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ရှိသမျှ android ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာလေ့လာနိုင်ရန်
Android အသုံးပြုသူရောင်းရင်းများ အဆင်ပြေနိုင်စေရန် တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ 12.08.2013 မှာ Android လုလင် ဘလော့ကို တည်ထောင်တာ တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ပါပြီ။
ဒီတော့ ပြုလုပ်နေကြအတိုင်း အမှတ်တရနေ့မှာ အလန်းလေးတွေ တင်ပေးနေကြထုံးစံအတိုင်း ဒီပို့စ်လေးကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Camera 360 v4.6 For Android (Last Update)
Camera 360 ကတော့ Update ထွက်သွားပါပြီ..
Facebook သုံးတဲ့ လူတိုင်းသိပါသောကြောင့်. ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မကြော်ငြာတော့ပါ
ဒီ Version မှာ အရင် Version တွေနဲ့ မတူပဲ Instagram လိုမျိုး Facebook နဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
Effect တွေကလည်း တော်တော်လေး လန်း လာပါတယ်..
Myanmar Hot Lines App For Android-(v.1.0)
Android ဖုန်းများအတွက် အဆင်ပြေပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Myanmar Hot Lines Free Mobile Appလေးပါ။
Android ဖုန်းသုံးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် Myanmar Hot Lines ဆိုတဲ့ Free Mobile App လေး Play Store ပေါ်မှာရောက်နေပါပြီ။ တခါတလေမှာ အရေးတကြီး ကိုယ်သိချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ လမ်းညွှန်စာအုပ်တွေမှာ ရှာဖွေနေစရာမလိုပဲ ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားလိုက်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းလိုင်း၊ အရေးပေါ်၊ စတဲ့.. ဖုန်းနံပါတ်တွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေပြီး တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။Google Play Store ပေါ်မှာFreedownload ရယူနိူင်သလိုMyanmar Mobile App Storeတွင်လည်းဒေါင်းလော့ရယူနိူင်ပါပြီ။ သုံးရတာအတော်လေး အဆင်ပြေနိုင်လို့ မိတ်ဆွေများကို သတင်းကောင်းလေး မျှဝေပေးပါရစေ..ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Appလေးတခုပါ။
Samsung Galaxy Ace GT-S5830i 2.3.6 root လုပ်နည်း
သူငယ်ချင်းကောင်လေးတစ်ယောက်က မေးတာနဲ့ ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တ်ာကိုတိုင်သုံးလုံးလောက် လုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီး အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ ဒီနည်းလေးကတော့ Samsung Galaxy Ace GT-S5830i v.2.3.6 root လုပ်နည်းလေးပါ။
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ s2 gt-i9100 4.1.2 ကို S3 တို့လို Note2 တို့လို multiwindow လေးတင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ အပေါ်က notification bar ရော ဘေးက sidebar ဘားမှာရော ပါလာပြီးသားပါ setting ထဲမှာလည်း ပါလာမှာပါ။
Air Call-Accept အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဗားရှင်း အသစ်
Air Call-Accept အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 8လပိုင်း 3ရက်နေ့က
ဗားရှင်း အသစ်ထွက်လာလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ဖုန်း အင်တာနက်ကို မြန်ဆန်အောင်လုပ်နည်း နောက်တစ်နည်းပါ
ကျွန်တော်ပထမတင်ပေးထားတဲ့ Apk အစဉ်မပြေတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
GSM/CDMA ဖုန်းတွေက EVDO,EDGE (2G,3G) အင်တာနက် speed ကိုသိသိသာသာမြန်စေပါတယ်။
2G/3G, EDGE, UMTS, LTE, WIFI
ရေးတဲ့အချိန် 4:28 PM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Samsung Galaxy S Advance GT-I9070 ကို Official Jelly Bean 4.1.2တင်ပြီး Rootလုပ်ကြမယ်
မန်ဘာဝင် 200 ပြည့်ပိုစ့်မှာ
koko August 3, 2013 at 10:08 PM
အကိုကျွန်တော့ဖုန်းကိုလေဖားရှင်းမြင့်ခြင်လို့အဲဒါ rood ဖောက်ရ
ကျွန်တော့ဖုန်က galaxy S advance ဗျကူညီပါအုံးအကိုရာအခု
ဖားရင်းက 2.3.6 ပဲရှိတယ်ဂိမ်းကြီးတွေသိပ်ဆော့မရလို့ ဘယ်လောက်ထိမြှင့်လို့
လုလင်ပျိုက mobile developer လည်းမဟုတ်ပါ။ပညာရှင်လည်း မဟုတ်ပါ။
မန်ဘာဝင် 200 ပြည့်ပို့စ်မှာ လုလင်ပျိုပြောထားတဲ့
တစ်နေ့တုန်းကပေါ့ဗျာ အားအားယားယား ရှိတာနဲ့ လုလင်ပျို ဖုန်း samsung glaxy gt-s5660 ကို ဗားရှင်း 4.0.0 ဆိုတဲ့ ice screen sandwish တင်လိုက်တာလေ
တေရောဗျာ ဒုက္ခက အဲမှာစတာ
အဲလို တင်လိုက်တော့ ဘာတွေ ဖြစ်သွားလဲဆို cpu တွေ မနိုင်တော့ဘူး အားကခဏလေးကျတယ်
ဗီဒီယိုတွေ အကုန်ကြည့်မရတော့ဘူး ၊နောက်ပြီး gif ဓာတ်ပုံတေါ မလှုပ်တော့ဘူး ရေဒီယို မပါတော့ဘူး ဖုန်းလာရင် ringtone မမြည်တော့ဘူးလေ
ဘတ္ထရီကလည်း ခဏခဏကျတယ် စက်ကလည်း ခဏခဏ ဟန်းတယ်။
ကဲ ဒါလေးကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဖုန်းကို ဗားရှင်းမမြှင့်ခင် အရင်စဉ်းစားပါ။
ဘာဖြစ်ဖြစ်ချမယ်ကွာ ဆိုလဲ ချပေါ့နော်။
လုလင်ပျိုက ဖြစ်ဖူးလို့ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ခင် အရင် သတိပေးတာပါ။
ကျနော်အခုဖော်ပြပေးမှာကတော. Samsung Galaxy S Advance GT-I9070ကို Official Jelly Bean 4.1.2တင်နည်းလေးပါ။ကျနော်နဲ.အတူလိုက်လုပ်ကြည်.ကြရအောင်နော်။
ရေးတဲ့အချိန် 2:47 PM7comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ Firmware Download, root ဆော့ဝဲ။လုပ်ဆောင်ချက်
ညီညီတွေကိုကိုတွေအတွက် နောက်ထပ်ရှယ် Spicy Magazine Sexy Latinas
နိုင်ငံခြားက မော်ဒယ်အလန်းလေးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို Video ရော Photo ပါအပြည့်အ၀ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မယ့် Application လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Application ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Video နဲ့ Photo တွေကိုတော့ မိမိရဲ့ Personal Data အဖြစ် သိမ်းဆည်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Offline ပြန်ကြည့်နိုင်မယ့် Application မျိုးပါ။ လစဉ်လတိုင်း တစ်လတစ်ကြိမ် တင်သမျှ Magazine အသစ်တွေကို Update ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ပါနော်။ အခုအသစ်ထွက်တဲ့ Issue 1 မှာမှာတော့ စာမျက်နှာ 80 တိတိပါတယ်လို့ သူ့ရဲ့မူရင်းဆိုင်မှာ ပြော ထားပါတယ်။ Android OS 1.6 ရှိရုံနဲ့ အခု Application လေးကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Samsung Galaxy S4 မှာပါတဲ့ Air Call Accept ကို Android ဖုန်းတိုင်းသုံးနိုင်ပြီ။
ခေါင်းစဉ်လေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘဲ စိတ်ဝင်စားသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အတော်လေး စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Galaxy S4 မှာပါတဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Air Call Accept ဆိုတဲ့ Function ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Galaxy S4 မှာဘဲအသုံးပြု နိုင်ခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ Android OS 1.5 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ မည်သည့် Hand Set မှာမဆို Air Call-Accept ဆိုတဲ့ Function ကိုအသုံးပြုနိုင်နေပါပြီ။ အဲဒီ Function လေးကတော့ ဖုန်းလာတဲ့အခါမှာ ဖုန်းကို ထိစရာကိုင်စရာမလိုဘဲ ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို လက်လေးနဲ့ လှုပ်ရမ်းလိုက်ရုံနဲ့ ဖုန်းကိုင်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ အတော်လေးတော့ လန်းပါတယ်ဗျာ။
ကိုကို ညီညီ များအတွက် ရှယ်တကာ့ရှယ် နော် 18+မြန်မာ ...
အိမ်ထောင်ရှင်များ အတွက် ကလေးစောင့်ရှောက်ပုံ App Fo...
Gif Camera (ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ပုံ အရှင်လေးတွေ လုပ်မ...
Android မှာ ကျားထိုးမယ် ( Checkers Game for Androi...
EarSmart က သင့်ဖုန်းကို မော်ဒယ်မြင့် ဖုန်းတွေလို န...
ANDROID ဖုန်းမှာ VIBER လို စကားပြော ချက်တင်လုပ် အသ...
ကိုယ့်ဖုန်းကို ဘယ်သူ လာကိုင်သွားလဲ သိချင်ရင် Phone...
စလောင်းတပ်ဆင်ပြုပြင်ရေးသမား များအတွက် Android Appl...
မြန်မာဂိမ်း အသစ်တစ်ခု လာပြန်ပြီ I'm Jack (ခုန်ပျံေ...
SAMSUNG ANDROID ဖုန်းတွေမှာအီးမေး PATTEN /LOCK ကျတ...
android ဖုန်းမှာ ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲ ဖိုင်တွေကို hide...
Photo movie creator (မိမိဓါတ်ပုံတွေကိုနောက်ခံသီချင...
ဆော့ဝဲတွေ free ရတဲ့ Black market ဆို သိကြပါတယ်နော်...
Android Phone Booster (ဖုန်းလေးနေရင် ဒီဆောဝဲလေးသုံ...
ပုံထဲကလို ချစ်သူ ပုံနောက်ခံလေးနဲ့ wallpaper မှာ လန...
MPT Service v1.0.1 (ဗားရှင်းအသစ်ပါ အရင်ဟာ သိပ်အဆင်...
All format media player ဆိုတာ media နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ...
ဖုန်းအားပြည့်ရင် အချက်ပေးမယ် unplug လုပ်ရင် အချက်ေ...
Game Hacker ကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုပီး ဂိမ်းများကို ...
ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်ကို ဖုန်းနဲ့ရွယ်လိုက်ရုံနဲ့ ငွေဖြည...
Android လုလင် ဘလော့ တစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ကိုယ်တိုင...
Air Call-Accept အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဗား...
ဖုန်း အင်တာနက်ကို မြန်ဆန်အောင်လုပ်နည်း နောက်တစ်နည်...
Samsung Galaxy S Advance GT-I9070 ကို Official Jel...
Samsung Galaxy S4 မှာပါတဲ့ Air Call Accept ကို And...
How to Reboot Android Phone/Tablet into Safe Mode
၁.၈.၂၀၁၃ မှစ၍ 1331 နံပါတ်သို့ SMS ပေးပို့၍ Interne...
Root Transmission for Android